स्वास्थ्य – Page 16 – JanaSanchar.com
प्राण घातक बन्दै स्क्रब टाइफस
पछिल्लो समय निक्कै प्राण घातक बन्दै गएको रोग स्क्रब टाइफसबाट चितवनमा कार्तिकमा मात्रै चार जनाको ज्यान गएको छ । कात्तिक अन्तिमसम्मतिर चितवनमा थप एक महिलाको मृत्यु भएपछि एकै महिनामा स्क्रब टाइफस रोगबाट मृत्यु हुनेको चार पुगेको हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार कात्तिक अन्तिम साता भरतपुर उपमहानगरपालिका–२२ निवासी ३५..
तीनजना मानिसको आनुवंशिक मिश्रणबाट १ शिशुको जन्म
अमेरिकामा वैज्ञानिकहरुले तीनजना मानिसको आनुवंशिक मिश्रण गर्ने नौलो प्रजनन प्रविधिमार्फत विश्वको पहिलो शिशुको जन्म भएको जनाएका छन्। आमा, बुवा तथा एक डिम्ब दाताको आनुवंशिक मद्दतले आमामा भएको दुर्लभ घातक आनुवंशिक अवस्थाबाट जोगाएर उक्त शिशुको जन्म गराउन सफल भएको उनीहरुले जनाएका छन्। चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले पाँच महिनाको भएको उक्त..
के तपाइंलाइ ग्यास्ट्रिक समस्या छ ? यी ६ कुरामा ध्यान दिनुहाेस्
कागती पानी : पेटमा धेरै ग्यास भएको अवस्थामा कागती पानी पिउने । यसले ग्यास हटाउने काम गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन । खाली पेटमा कागती पानी खानाले पेटमा ग्यास कम हुन्छ । कार्बोहाइड्रेट कम खाने : पेटमा ग्यास जमेर पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले बियर, वाइन, मकै, राजमा, बन्दा, प्याजजस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ । दूध नपिउने : ग्यास्ट्रिक..
विश्वमा हर्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । हर्टअट्याकले धनी, गरिव उमेर केही पनि भन्दैन । हर्टअट्याक यो समय र यति बजे आउँदैछुँ भनेर कहिल्यै भन्दैन , यो जुनसुकै बेला जहाँ पनि आउन सक्छ । तर हर्टअट्याक हुनासाथ के गर्ने भन्ने उपायका बारेमा जानकारी भएमा यो समस्यालाइ केही समाधान गर्न भने सकिन्छ । हर्टअट्याक पूर्व जानकारी..
उपचार गर्नु नपर्ने रोग जन्डिस
१२ वर्षीय सुजितले लगालग दुई दिन खान मन गरेनछन् । यसअघि मज्जाले खाने उनको तौल पनि खाएकै जस्तो २४ किलो थियो । एकाबिहान दाँत माझ्दा वाक् वाक् आएपछि नजिकको मेडिकलमा गएर बिलिरुबिन जाँच गर्दा १.३ देखिएछ । उनकी आमा सहनशीलाले नजिकको वैद्यकहाँ गएर दुईथरीको औषधि ल्याइन् र खुवाउन थालिन् । मासुप्रेमी सुजितले उसिनेको साग र भातमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।..
लमजुङ जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीमा भाइरल ज्वरो फैलियो
लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरस्थित जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीमा एकसाता यता भइरल ज्वरोको संक्रमण फैलिएको छ । कैदीबन्दीमा ज्वरोको संक्रमण देखिएको र बिरामी पर्न थालेको जेलर काजीमान सुनारले बताए । उनका अनुसार बिरामीमध्ये ५ जनाको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । अन्य कैदीबन्दी बिरामी हुन थालेपछि शनिबार कारागारका सवै..
काठमाडौंको पानीमा दिसामा पाइने जिवाणु भेटियो, हैजाको संक्रमण फैलिँदो
काठमाडौं उपत्यकाको पिउने पानीमा मानव दिशामा पाइने कोलिर्फम भेटिएको छ । जसका कारण हैजाको संक्रमण पाइएको छ । यो साता भैंसेपाटीमा हैजाको विरामी भेटिएको छ । भैसीपाटीबाट मात्र अहिलेसम्म चारवटा हैजाका घटना बाहिर आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार यससँगै काठमाडौ..
भाइरल रुघा अनि ज्वरोलाई निकोपार्न बिर्सनै नहुने ५ कुरा
धुलो, धुवाँ अनि मौसम परिवर्तनले भाइरल ज्वरो अनि रुखा खोकी बढेको छ। अझ काठमाडौंको विशेष धुवाँ धुलो युक्त हावा, मानिसको चाप र अस्वस्थकर बानी व्यवहारले झनै विकराल रुप लिदैँ गएको छ। सामान्य रुखा लाग्ने बित्तिकै आत्तिएर डाक्टरको शरणमा पुग्ने, एन्टिबायोटिक खाने अनि फेरी रोगको लागि शरीर तयार राख्ने प्रचलन बनेको छ। नियमित चेकअपको लागि अस्पताल..
पानी पिउनुस, १० दिनमा ५ किलो घटाउनुस
पानी जीवनका लागि कति महत्वपुर्ण चीज हो भनिरहनु पर्दैन। अब पानी पिएर नै तौल घटाउने सकिने तरिकाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्। बेलायतकी वेलनेस तथा फिटनेस विशेषज्ञले शाउना वाकरले ‘वाटर थेरापी’का विषयमा कयौं प्रयोग गरिन्। उनले धेरै प्रयोगका निचोड निकाल्दै पानी नै पिएर १० दिनमा ५ किलोसम्म तौल घटाउन सकिने दाबी गरेकी छिन् ।उनी भन्दछिन- प्रत्येक..
थकाइ लाग्नु सामान्य होइन
'किन मलाई यति धेरै थकाइ लाग्छ ? व्यस्त, भागदौड र प्रतिस्पर्धाको यो समयमा प्रायः सबैले चिकित्सक, आफन्त र साथीभाइलाई सोध्ने प्रश्न हो यो । 'एकछिन काम गर्नासाथ थकाइ लागिहाल्छ न त सुत्दा नै राम्ररी निद्रा पर्छ', यो गुनासो पनि आम बनेको छ । उत्पादनशील उमेर समूहका मानिस पनि थकाइ लागेर केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दै भन्छन्, 'बिहान उठ्दा आलश्य हुन्छ,..